Soft Webbing èbè
Igwe na-eweli ọla
Kwụ N'ibuli doo Series
Njikọ Chain Accessaires
Eriri eriri Waya
The esorowo US ụdị turnbuckles na-eji ikesiike t ...
Njikọ njikọ njikọ
Ta Shackle WLL ABCDE ...
Electric ndoli nwere ike kere n'ime waya eriri electri ...
Ngwunye mpempe ígwè
Steel slab billet mwekota Rail clamps: mainl ...
Ihe: High polyester (100% PES) Safety f ...
Free sample maka Alloy Steel ibuli èbè na abụọ L ...
T (8) otu-ukwu yinye èbè Standard GB / T2 ...
Steel slab mwekota billet lifting mwekota
Emere ngwa ngwa maka ịbugharị ihe eji arụ ọrụ maka ahụmịhe eji arụ ọrụ maka ahụmịhe ụlọ site na ụlọ na mba ofesi na ahụmịhe anyị na-emepụta kemgbe ọtụtụ afọ na enweghị ike oriri, enweghị nnyonye aka nke electromagnetic, nke a pụrụ ịdabere na ya na nchekwa na arụ ọrụ ma na-agbanwe agbanwe ime mgbanwe. Eziokwu egosila na ngwa ọrụ ebuli elu a nwere ike ibu ma budata akwụkwọ nchara n'ụba n'enweghị nkwado nke ndị ọrụ na ala, nke bụ ezigbo ebuli ...
Na-adịgide Adịgide Na-eweli Igwe Ọdụdọ
Na-adịgide adịgide magnetik lifter The Super Igwe Ọdụdọ Automatic Lifting Sucker bụ nkà na ụzụ ngwaahịa mepụtara dabere na elu-ume magnetik ihe. Ọtụtụ-eji na njem na-eweli usoro nke ígwè, machining, ebu, ụlọ nkwakọba ihe, wdg The njikọ nke ngọngọ na cylindrical magnetik conductive ígwè ihe nwere ike ukwuu melite arụmọrụ nke loading na ebutu na njikwa nke workpieces. Nkọwapụta Model gosiri ikike mbuli ikike Akụkụ (mm) Ibu n'arọ ...
Ibu ibu iga Trolley
Ibu ibu ebu Trolley Industrial igwe ala dollies na kasị elu pụrụ ịdabere, anwụ ngwa ngwa na nchekwa ọkọlọtọ. Ihu ihu na-abịa na-ebugharị na-akwado ntụgharị ntụgharị na-enye ohere ijikwa nnwere onwe na-enweghị mkpa ịkwụsị ma weghachite ịtụgharị. Were aka ma ọ bụ tinye aka na forklift maka ịdọpụta. Na-ebu ibu dị mfe site na isi A ruo mgbe B na obere mgbalị. Usoro dolly agaghị apụ apụ n'okpuru ibu ahụ - ọbụlagodi n'okpuru na-adọta ma na-adọta. Anya n'etiti azụ azụ bụ ...
Eriri eriri Waya na Open Spelter Socket
Open Type Nkedo Socket Steel Waya eriri eriri èbè maka Marine Towing na ngwaahia Services.
Kpaliri Anyị Gdị G416 Grooved Open Type Spelter Socket
Steel eweli efere mwekota
Ngwaahịa nkọwa: Steel lifting plate mwekota High Quality Forging Steel Vetikal efere Lifting mwekota Model Work Load Limit (Ton) Jaw Opening (mm.) Ibu Onye ọ bụla (n'arọ.) LWK928-1 0.8 0-16 2.8 LWK928-2 1 0-22 3.6 LWK928-3 2 0-30 5.5 LWK928-4 3.2 0-40 10 LWK928-5 5 0-50 17 LWK928-6 8 0-60 26 LWK928-7 10 0-80 32 LWK928-8 12 25-90 48 LWK928- 9 16 60-125 80 kwụ ígwè eweli efere C ...
Jiri na njikọ yinye, ejikọta na yinye na ekewetde nke lin yinye èbè.
Ngwa: Ndị na-acha ọcha ewepụghị webbing èbè na ọtụtụ-eji ụgbọelu, aerospace, nuklia ike oruru, agha n'ichepụta, n'ọdụ ụgbọ mmiri loading na ebutu, ike na ngwá, igwe nhazi, chemical ígwè, shipbuilding, njem na ndị ọzọ ubi.
Uru nke mpempe mpempe slab na-arụ ọrụ nke ọma, n'ụzọ dị mfe na nchekwa. Usoro mmeghe na mmechi ka nke alloy nchara nwere oke ike wearable. Mpempe akwụkwọ slab nwere ogologo ndụ ọrụ. Dabere na nhazi ya, a na-ekekọta mpempe mpempe mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na nke nwere ike idozi (ịdị elu H enweghị ike ịgbanwe). Ngwunye mpempe akwụkwọ dị mma maka ibuli nkọwa dị iche iche na ọnụọgụ dị iche iche.
Waya eriri mwekota
Ngwaahịa a na ọtụtụ-eji ígwè, n'ibu ebu nhazi, nkwakọba na ndị ọzọ na-eweli usoro.
Eriri waya waya eriri
Ihe e ji mara ya bụ eriri ahụ nke dị nro, enwere ọtụtụ ebe na-ebuli elu, nwere ike idozi ajụjụ nke obere ohere na oke ikike ikike.
Eriri waya waya
Ngwa: Adabara transformer, shipbuilding na pụrụ iche igwe na a dịgasị iche iche nke gburugburu ebe obibi na nnukwu eweli pụrụ iche chọrọ. Opekempe na-agbasa ike nke eriri waya na-enweghị nkwonkwo bụ oge 6 nke ibu ọrụ.
Jirinụ nsị weebụ
Adress: Mba 188, Longgang Road, Gaogang District, Taizhou City, 225300, Jiangsu, China